काठमाडौँ, पुस २३ गते । आर्थिक क्रान्तिका लागि नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रुपमा विकसित गर्नु जरुरी भएको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
'नयाँ नेपाल, नयाँ आर्थिक क्रान्ति' मूल मन्त्रलाई साकार पार्न पर्यटन व्यवसायको अति महìवपूर्ण भूमिका रहने हुँदा नेपाललाई विश्वकै पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउने सबै ...
काठमाडौं, पुस २४ गते । अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरू नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण वर्तमान सरकारले कुनै पनि भ्रष्टाचारी नेतालाई नछाड्ने बताउनुभएको छ ।
"यो देशमा सबैभन्दा बढी राजनीतिज्ञहरूले नै भ्रष्टाचारी छन् । देश र जनता नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा ...
Page 1189 of 1196
Migrant caravan: 'Our strength is greater than Trump's threats'
CE to visit Japan
CE to visit Beijing, Hebei
Gov't to give storm clean-up update
Playground breaks down barriers
New land link an engineering feat